Chinyorwa kubva kuRoad | Martech Zone
China, April 26, 2018 Douglas Karr
Gore rekupedzisira rave riri rinoshamisa gore kwandiri nebhizinesi rangu. Iko kutarisisa uye kutarisisa kune vatengi vangu zvave zvichibereka uye ini ndinotenda zvikuru nekuda kweanoshamisa vatengi andinayo! Dambudziko randakaita nebasa rake rekuyera (iro randinoda) nehutano (izvo zvandisina hanya nazvo). Pamusoro pegore rapfuura, kukuvara pamwe chete netsika dzakaipa zvakasimudzira marara angu kusvika padanho uye zvakandirwadza.
Yakanga iri nguva yekuburitsa uye kutarisazve.
Nerwendo rwakatemerwa kuenda ku DellWorld, Ini ndakatora mukana wekuchinja misangano uye kuisa tarisiro nevatengi kuti ini ndinenge ndiri kushanda kubva munzira. Ndakafunga kutyaira mota kubva kuIndipolis kuenda kuLas Vegas, ndichitora nzira yekumaodzanyemba iyo yanga isingachinje hupenyu.
Kufunga Nezve Tekinoroji uye Ramangwana Redu
Yakawanda yenguva yangu yekuzorora yerwendo yange ichishandiswa mukutsvagurudza yega yega yegumi kana vakabvunzurudzwa isu tichave tichiita podcast ye Dell Mwenje. Mhando yemisoro uye kushandiswa kwetekinoroji kuri pamusoro pekufungidzira kwako - ive shuwa yekunyorera. Ini ndakagarawo mune yekukurudzira mharidzo svondo rino pavanhu-tekinoroji fungidziro - izvo zvakaita kuti ndifunge zvakawanda nezverwendo urwu.
Nekuti ini ndakatakura midziyo yangu, ndakahaya a 2018 Chrysler Pacifica nemabhero ese uye miridzo. Zvimiro zvinosanganisira:
Carplay - kuwedzerwa kweIOS inoshanda musina chairo neiyo mini-van, kubva pakufamba, kuenda kuSiri, kune mafoni, kumimhanzi
Adaptive Cruise Kudzora - pfungwa dzangu dzakanyatsoputika pachinhu ichi. Seta iyo cruise control uye mota inozoerekana yafamba nemotokari.
LaneSense - mota inoona yako nzira uye inokusundira kumashure kana iwe ukaenda kure zvakanyanya kuruboshwe kana kurudyi. Uye usaedze kubiridzira nekubvisa maoko ako padhiraivho - inokuzhamba.
Makamera 360 ekupaka - Ini handizive iwo mashiripiti avanoshandisa, asi iyo back-up rubatsiro rwekupaka hapana ipfupi neiyo wizardry.
Tichiri kufunga izvi se chimiro, chokwadi ndechekuti iri ndiro ramangwana rekudyidzana kwevanhu-muchina. Hapana akatora basa rangu kubva kwandiri… zvese izvi maficha akabatsira uye akasimudzira kudyidzana kwangu nemuchina. Ivo vakaita kuti kutyaira kwangu kuve kwakachengeteka, vakandibatsira kuchengetedza yakanaka gasi mileage, uye vakawedzera varaidzo kubva pafoni yangu kuenda kumota. Ichi ndicho chikonzero ini ndisinganetseke nezveramangwana, ndiri kutarisira kwazviri.
Kufunga nezvekushaikwa kweTekinoroji uye Redu Remangwana
Pandakasvika kuTexas, New Mexico, Arizona, uye ikozvino Utah, ndakave nenguva dzinoverengeka ne zero yekubatanidza online. Dzimwe nguva, zvaive pakati chaipo pekufamba! Ini ndakangotyaira ndokutora zvese mukati. Pasina kunyeverwa, beeps, haptic mhinduro… ingo nyarara. Pane imwe nguva, ndakamira paNavajo Bridge pakuvira kwezuva, ndakafamba panze, uye ndakakatyamadzwa - pakanga pasina chinhu. Hapana ruzha, hapana zvinokanganisa, hapana vanhu, iwe waisatombogona kunzwa mhepo. Handizive kuti ini ndambove ndakanyanya kusununguka.
Sezvo isu patinobatanidza uye nekushandura ramangwana redu, tichave tichida nguva yekudzima. Ndiri kuzoita yakawanda yekuedza kuzviita vhiki rega rega. Ini handifunge kuti 24/7 kubatana kune hutano kwandiri. Zvinogona kunge zvisiri zvako, futi.
Tichasimudza Munguva pfupi
Tevera yangu Instagram kana uchida kuona dzimwe dzenzvimbo dzinoshamisa dzandakave. Ndakataura pamusoro Facebook kuti ndirege kuzombobhururuka zvakare - ndichifunga nezvezvinhu zvese zvisingatendeseke zvatinosuwa munyika ino yakanaka kubhururuka pamusoro panzvimbo ye kutyaira kuburikidza.
Ndiri kutarisa zuva nezuva, uye kumira nguva nenguva pazvitoro zvekofi. Nhasi, ndiyo Rwizi Rock Kunyorera Kambani. Izvi ndezvipi zvekutarisa:
Nekudaro, ini ndanga ndichida kukuzivisa iwe kuti sei - mushure memakore gumi nemashanu ekuburitsa - hauna kuona zvakatumirwa zvakawanda mavhiki mashoma apfuura. Nezvekudya kwangu zvakadzokera panzira, huropi hwangu kuwana mweya wakachena, mweya wangu wakafemerwa, uye musangano wangu mukuru wegore rose mumwedzi mumwe chete… Ndiri kutarisira kuwana kudzikama zvakare kuhupenyu hwangu muna Chivabvu.
Pakati pezvino uye ipapo, kana iwe uchida kunyora tsamba yevaeni nezvekutengesa kana kushambadzira tekinoroji - inzwa wakasununguka kurova iyo pasi peji uye zadza zvese zvese akumbira. Kwete backlinkers ndapota.
Ndoenda ... simba rangu riri pa3%.
Tags: Arizonadouglas karrnew mexicorwendo nenzirautah
Kumhanyisa Insights: Kufanofungidzira Kwayedza ye Direct Mail